बलेवा क्षेत्रमा बस सेवा शुरु::Online News Portal from State No. 4
बलेवा क्षेत्रमा बस सेवा शुरु
बागलुङ, ९ कार्तिक — जिल्लाको बलेवा क्षेत्रमा यात्रुबाहक बसले सेवा दिन थालेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले नगरका मुख्य सडकको स्तरोन्नती गरी सहज यातायात सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार बलेवा क्षेत्रमा यात्रुवाहक बसले सेवा दिन सुरु गरेका हुन् । यात्रुबाहक बसले सेवा दिन थालेपछि निजी सवारी तथा पिकअप जिपमा महंगो भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको स्थानीयको भनाई छ । बलेवा भैरवस्थानदेखि बागलुङ बजारसम्म आउँनका लागि दुई सय पचासदेखि तीन सय रुपैयाँ तिर्ने यात्रुहरुले बस सेवा सञ्चालनमा अएपछि एक सय बिस रुपैयाँमा यात्रा गर्न पाएका छन् । बस सेवा सञ्चालन भएपछि सदरमुकामसम्म आउँनका लागि महंगो भाडा तिर्नुपर्ने तथा जिप रिजर्ब गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयको भनाई छ । बलेवा क्षेत्रका नारायणस्थान, पैयुपाटा, अमलाचौर लगायतका क्षेत्रमा गत वर्षपनि बस सेवा सञ्चालन भएको थियो ।
वर्षात्को बेला पानीले सडक खोलेका कारण अवरुद्ध बस सेवा सडक मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए । अहिले नगरपालिकाले निर्माण सुरु गरेको सडकखण्डमा सहज यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सडकलाई सधैभरि सञ्चालन गर्नका लागि नाली व्यवस्थापन गर्न सक्ने होभने वर्षात्को समयमा बस सञ्चालन गर्न सकिने सवारी चालक चन्द्रबहादुर बिकले बताए । बिहान बलेवाको भैरवस्थानबाट छुट्ने बस बेलुका बागलुङ बजारदेखि छुट्ने रुट कायम गरिएको छ । बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि बलेवा क्षेत्रका नारायणस्थान, पैयुपाटा, अमलाचौरका स्थानीय लगयात बलेवा क्षेत्रको प्रसिद्ध भैरवस्थान मन्दिरसम्म पुग्ने दर्शनार्थीका लागि सहज भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले नगरका प्रमुख सडकलाई गौरवको योजनाको रुपमा बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेकाले अबको केही वर्षभित्र ती सडकमा नियमित सवारी सञ्चालन हुने बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनक पौडेलले बताए । बागलुङका सडक निर्माणमा हुने प्रतिस्पर्धा सडक व्यवस्थापनका लागि हुँन नसक्दा यात्रुहरुले सधै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । यात्रुलाई सधैभरिको सास्तीबाट अन्त्य दिलाउँनका लागि सडकको व्यवस्थापन जरुरी छ ।